Alika Manerantany dia tranonkala iray an'ny Internet AB, izay ampahafantarinay anao isan'andro ny momba ny karazana canine malaza indrindra sy ireo izay tsy dia malaza loatra, ny fikarakarana ilain'ny tsirairay amin'izy ireo, ary raha tsy ampy izany dia izahay manolora torohevitra maro ho anao hahafahanao mankafy bebe kokoa ny namana tongotra efatra.
Ny ekipa fanontana ao amin'ny Mundo Perros dia misy ekipa iray tena tia alika, izay hanome torohevitra anao isaky ny mila izany ianao isaky ny manana fanontaniana momba ny fikolokoloana sy / na ny fikojakojana ireo biby sariaka ireo izay heverina ho iray amin'ireo sakaizan'ny The humanity. Raha liana hiara-hiasa aminay ianao, fenoy ity takelaka manaraka ity ary hifandray aminao izahay.
Ny alika dia biby izay tiako be foana. Soa ihany aho fa niara-niaina tamin'ny maro nandritra ny fiainako, ary matetika, amin'ny fotoana rehetra, tsy hay hadinoina ilay traikefa. Ny fandaniana taona maro miaraka amin'ny biby toy izany dia mety hitondra zavatra tsara fotsiny ho anao, satria manome fitiavana izy ireo nefa tsy mangataka na inona na inona ho setrin'izany.
Hatramin'ny enin-taona aho dia nanana alika. Tiako ny mizara ny fiainako amin'izy ireo ary manandrana mampahafantatra ny tenako foana aho mba hanome azy ireo ny kalitaon'ny fiainana tsara indrindra. Izany no antony itiavako manampy ny hafa izay, toa ahy, mahalala fa zava-dehibe ny alika, andraikitra iray izay tsy maintsy karakaraintsika ary ataovy sambatra araka izay tratra ny fiainany.
Mpitia be biby sy alika lehibe toy ny huskies, mila mipetraka aho mahita azy ireo lavitra satria mipetraka amin'ny trano kely loatra aho. Mpankafy alika toa an'i Sir Didymus sy Ambrosius na Kavik, ilay amboa amboadia. Ny fanahiko dia alika an-tendrombohitra Bernese antsoina hoe Papabertie.
Nihalehibe foana aho voahodidin'ny biby toy ny saka siamese ary indrindra ny alika, samy hafa firazanana sy habe. Izy ireo no orinasa tsara indrindra misy! Ka ny tsirairay avy dia manasa anao hahafantatra ny toetrany, ny fiofanany ary izay rehetra ilainy. Tontolo mampientam-po feno fitiavana tsy misy fepetra ary maro hafa koa izay tsy maintsy hitanao isan'andro.
Tena tiako be ny alika ary efa namonjy sy nikarakara azy ireo hatramin'ny nanaovako lamba fidiovana. Tena tiako ireo hazakazaka, saingy tsy tantiko ny fijery sy ny fihetsiky ny metisy, izay itovizako ny fiainako isan'andro.
Izaho dia mpilatsaka an-tsitrapo tao amin'ny toeram-pialofana an-taonany maro, ankehitriny dia tsy maintsy natokana ho an'ny alikako manokana ny androko rehetra, izay tsy vitsy. Ankafiziko ireo biby ireo, ary tiako ny mandany fotoana miaraka amin'izy ireo.
Mpanabe kanine, mpanazatra manokana ary mpahandro ho an'ny alika monina any Seville, manana fifandraisana ara-pihetseham-po lehibe amin'ny tontolon'ny alika aho, satria avy amin'ny fianakavian'ny mpampiofana, mpikarakara ary mpiompy matihanina, nandritra ny taranaka maro. Ny alika no tiako sy asako. Raha manana fanontaniana ianao dia faly aho manampy anao sy ny alikanao.